Sheet Silicone ee Farshaxanka - Caaryada Daarashada Gogosha Dahabka, Suufka Epoxy Rinjiga Rinjiga, Premium Silicone Mat, Nonstick Nonslip Heat-Adkaysi u leh warshad iyo waara | Transben
Baaxad Weyn & Midab dhalaalaya: Cabbir ballaaran oo dheeri ah ayaa la qabsada deegaanno kala duwan waxayna si wax ku ool ah uga caawisaa nadaafadda miiskaaga. Iyada oo midabada firfircoon iyo tayada waara ay ka dhigayso aqoon isweydaarsigaaga mid madadaalo leh oo hagaagsan.
Mawduucyo Ujeedo Badan: Ku habboon farsamooyinka, dahabka, wasakhda wax lagu rido iyo aaladaha kale ee DIY iyo agabyada, dheryasameeyayaasha, rinjiyeynta ama mashaariicda farsamada kale. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa dubista iyo gogosha cajiinka, gogosha fondant, difaaca sare ee miiska iwm.
Premium Silicone: 100% silikoon heer cunto ah ayaa la sameeyay, dib loo isticmaali karo oo bey'ada u fiican. Aan ku dhegganayn, u adkaysi u leh kuleylka, aan waligiis midab lahayn, muddo dheer soconaya. Qalab ururiyaha qumman iyo ilaaliyaha dusha sare, gaar ahaan qalab caawiyaha wanaagsan ee farsamada DIY. Waa loo goyn karaa iyadoo loo eegayo baahidaada shaqsiyeed.
Nonstick & Easy to nadiifi: Biyo diirran oo saabuun leh, inta badan waxyaabaha wasakhda ah sida xabagta, cusbi, epoxy si fudud ayaa dhaqso looga saari karaa. Markay nadiif tahay oo qalalan tahay, waxaad ku laaban kartaa cabbirka la qaadi karo oo banaanka ayaad ku qaadi kartaa.
Bixin La'aan: Taabasho fiican oo siman, labada dhinac ee sariirta waa la istcimaali karaa waxayna ku yeelan karaan khilaaf miiska miiska shaqadaada mid fudud. Had iyo jeer seex dhig adigoon duuduubnayn oo foorarin, si fiican uga hortagga siibashada, sidoo kale si wax ku ool ah uga hortag in waxyaabaha dul yaal ay siiban.
Hore: Silicone Trivets Mats, Kuwa haysta silikoon Weelasha loogu talagalay Suxuunta kulul Suxuunta kulul ee Jikada, Qaadada Nasashada Isku-darka Qalabka Jikada
Xiga: Mats-hayaha Silikoon-hayaha - Kabadh Kululaado Qaadada Nasashada, Ujeedo Badan Dishers Kul Kulul Cunnada Fasalka Silicone
Silikoonku wuu rogaa Mats, Silicon Pot Pot Holders for ...
Mats Silterone Pot Holder Mats - Kululaado kulul ...